တရုတ်အိတ်ဆောင်မစင်နဲ့ Eva Pad foldable ဥယျာဉ် Kneeler နှင့်ထိုင်ခုံစက်ရုံနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Yisure
သက်ကြီးရွယ်အိုများအား AIDS ရောဂါ
အိတ်ဆောင်မစင်နဲ့ Eva Pad foldable ဥယျာဉ် Kneeler နှင့်ထိုင်ခုံ
Light weight Wheeled Shopping Trolley Bag – He...
Instant Water Absorbent Printed Diatomite Earth Bath...
မြို့ရိုးပေါ်မှာတပ်ဆင်ထား Ball Holder
ဟင်းချက် 1 ရေနံနှင့်ရှလကာ Bottle သမှုတ် 2
သံမဏိဘက်ထရီကော်ဖီရောနှောနို့က F operated ...
လျှပ်စစ်သံမဏိဆားနှင့်ငရုတ်ကောင်း Mills ကနှင့်အတူ ...
Health Care Living Aid Wire Loop Pull Through Button...
သက်ကြီးရွယ်အိုများအားက Non-လျှပ်စစ် Up ကိုလြယ္ကူထိုင်ခုံ Assist
Toilet Paper Holder Extension Long Reach Wipe Comfor...
မူလအစ: Ningbo တရုတ်
Delivery ဆိပ်ကမ်း: Ningbo သို့မဟုတ်ရှန်ဟိုင်း
ငွေပေးချေမှုရမည့် Term: T / T, Western Union, PayPal က, L ကို A / C
Delivery အချိန်: သိုက်ပြီးနောက် 35days ။
customization: စိတ်ကြိုက်လိုဂိုသို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်; စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုး
အထုပ်: polybag, အဖြူရောင်သို့မဟုတ်အရောင်သေတ္တာ
ထိုဥယျာဉ်ကိုအသုံးပြုမှုအတွက် tool ကို
သတ္တု + နဲ့ Eva
Multi-function ကို ဥယျာဉ်တော် kneeler နှင့်ထိုင်ခုံ
56X30X62CM 4PCS / CTN
နေ့နှုန်း 1000 Piece / ပိုငျးပိုငျး
မေးလ် box ကို
အရာများမရှိပါ .: 6055
DESCRIPTION:2အိတ်နှင့်အတူဥယျာဉ်တော် Kneeler
FOB ဆိပ်ကမ်း NINGBO
material: သံမဏိပြွန် + နဲ့ Eva ပြွန် DIA: ပြွန်၏ 22mm အထူ: 0.7mm နဲ့ Eva အရွယ်အစား: 41 × 15.5x2cm
UNIT SIZE: 60 * 27.5 * 49CM
MEAS./QTY 55X30X62CM 4PCS / CTN
ဘ / GW: 10.5 / 13.5KG
package: မေးလ်သေတ္တာသေတ္တာအရွယ်အစား: 61 * 27 * 13.5CM
1.We ထက်ပိုမို 10 နှစ်လိုင်းအတွက်အထူးပြုနေကြတယ်
2.Our ထုတ်ကုန်မြင့်မားတဲ့ LFGB, FDA ကများကဲ့သို့အများအပြားလက်မှတ်များနှင့်အတူအရည်အသွေး, အီး, ROHS များမှာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏ 3.The ဒီဇိုင်းကိုထူးခြားလက်ရာမြောက်သောဖြစ်ကြသည်။
1.We စသည်တို့ကိုစိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှု OEM, လိမ္မော်ရောင်, ပေး။
2. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များအတွက်2နှစ်ကအာမခံသည်။
3. ကျနော်တို့ 3days အတွင်းနမူနာကယ်မနှုတ်နိုင်။
4. ကျနော်တို့ 30days အတွင်းပုံမှန်အမိန့်မကယ်မလွှတ်နိုင်။
5.We, egT / T ကငွေပေးချေမှုအသုံးအနှုန်းများအမျိုးမျိုးတို့ကိုလက်ခံ L ကို A / C, ကုန်သွယ်ရေးအာမခံချက်, Western Union, PayPal ကစသည်တို့ကို
6. ကျနော်တို့အလွန်လျင်မြန်စွာနှင့်ထိထိရောက်ရောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ထံမှမည်သည့်မေးခွန်းများကို reply နိုင်ပါတယ်။
Ningbo Yisure စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ & ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်။ Ningbo, တရုတ်တည်ရှိသောအိမ်နှင့်မြှင့်တင်ရေးထုတ်ကုန်များ၏ဦးဆောင်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့အိမ်နှင့်မြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်ထုတ်ကုန်များအပြည့်အဝအကွာအဝေးရောင်းချလျက်ရှိကြသည်။ ကျနော်တို့မှိုကိရိယာများနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုဖောက်သည်များအတွက် OEM နှင့်လိမ္မော်ရောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ပါ။
သငျသညျ "ကျနော်တို့တရုတ်ပြည်၌ကျန်ကြွင်းသောလုပ်ပေးလိမ့်မယ်, သင့်ဖောက်သည်အာရုံစိုက်ပါ။ ကျနော်တို့တရုတ်နိုင်ငံတွင်သင့်ကိုယ်ပိုင်ရုံးခန်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် - ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူပြုစုပျိုးထောင်ဆက်ဆံရေး၏ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ်မှာကျိန်းဝပ်သည်ဟုအလွန်ကောင်းစွာသိကြ၏။
ဖြေငါတို့သည်သင်တို့၏စစ်ဆေးခြင်းများအတွက်နမူနာပေးပို့ဖို့ဝမ်းမြောက်တတ်ကြ၏။ စံနမူနာအခမဲ့နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်က express ကိုအခကြေးငွေပေးချေရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
1) ကျွန်တော်တို့ဟာနမူနာပေးနိုငျနှငျ့သငျတစျခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို canchoose, ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အညီအရည်အသွေးပါစေ။
2) ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့နမူနာ Send နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏အရည်အသွေးအတိုင်းဖြစ်စေမည်။
ဖြေပြဿနာတွေ၏ဓါတ်ပုံများကို ယူ. ကျနော်တို့ပြဿနာတွေ comfirm ပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးပို့, သုံးရက်အတွင်း, ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အစိတ်ကျေနပ်မှုဖြေရှင်းချက်စေမည်။
မေး: သင်ထုတ်ကုန်ပေါ်မှာငါတို့အမှတ်တံဆိပ် print ထုတ်နိုင်ပါသလား?
A: ဟုတ်ကဲ့, သင်တန်း၏။ ဖောက်သည်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်လိုဂိုထုတ်ကုန်အပေါ်ပုံနှိပ်နိုင်ပါသည်။
ယခင်: အကြီးစား Duty ပြိုကျ Rolling လှည်း - အလင်းကိုအလေးချိန်စျေးဝယ်ပုံဖမ်းတွန်းလှည်းအိတ်ဘီး
နောက်တစ်ခု: မီးဖိုချောင်ထဲက Tools သုပ်ရောနှောပလတ်စတစ်လက်စွဲစာအုပ်သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်သုပ်တိုးတက်မှုနှုန်း
ဥယျာဉ်တော် kneeler ခေါက်
ဥယျာဉ်တော် kneeler နှင့်ထိုင်ခုံ
ဥယျာဉ်တော် kneeler ခုံတန်းလျား
ဥယျာဉ်တော် kneeler ထိုင်ခုံ
ဥယျာဉ်တော် kneeler ထိုင်ခုံနှင့် tool ကိုသိုလှောင်မှု
အိတ်နှင့်အတူဥယျာဉ်တော် kneeler ထိုင်ခုံ
ဥယျာဉ်တော် kneeler မစင်
သံမဏိဥယျာဉ်ကို kneeler ထိုင်ခုံ
Polyester Folding Shopping Trolley Mini Shoppin...
New Non-toxic Deluxe Miracle My Latex Bamboo Fi...
No.218 Cangchu လမ်း, Jiangbei ခရိုင်, Ningbo, တရုတ်
သိကောင်းစရာများ - Hot ထုတ်ကုန်များ - မြေပုံအညွှန်း - amp မိုဘိုင်း
1pepper စက်များတွင်လျှပ်စစ်2, လျှပ်စစ်ဆား & ငရုတ်ကောင်း Mills က , ပလတ်စတစ်ဘုတ်အဖွဲ့ဖြတ်တောက်ခြင်း , လျှပ်စစ်ငရုတ်ကောင်း Mills က , လျှပ်စစ်ဆားနဲ့ငရုတ်ကောင်းစက် , သက်ကြီးရွယ်အိုများအားထိုင်ခုံကူရှင် ,